I-Recipe: Iibhasi ezibhasiweyo
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imveliso yobisi Ubisi
Ukuloba inhlanzi yindlela ephezulu kakhulu yokupheka, kuba intlanzi igcina yonke ijusi yayo, zonke iimpahla zayo ezifanelekileyo kunye namavithamini. Intlanzi - le mveliso iluncedo kuwo onke macala. Ukususela kumncinane kuncinci kucetyiswa ukuba uqale ukutya iintlanzi, kuba ngokufanayo ininzi enkulu yeprotein kunye ne-calcium emzimbeni. Lungiselela iintlanzi ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, i-perch ibhaka, iyaba yinto engathandekiyo, ilungileyo, isondlo, kodwa isebenzisekile. Bhaka iintlanzi ngokuphindaphindiweyo ekufakeni izithako ezongezelelweyo, usenokubhaka iintlanzi kwi-batter okanye kwenye i-sauce. Ngokubanzi, kukho ezininzi zokupheka. Ibheke elibhaka, isitya silula, okokuqala kuba le ntlanzi ingathengwa kalula kunoma iyiphi ivenkile. Ngoko bhaka i-bass nangona yonke imihla!
Igarliki eyomileyo igranti 1 tsp.
Ukuhlaziya i-fish tsp 1.
I-pepper ebomvu i-1 tsp.
Umlambo wePerki 500 g
Ibhota 20 g
Inyathelo 1 Ngaphambi kokuba uqale ukupheka i-perch, ulungise i-oven ukuya kuma-degrees angama-200. Thatha iibhotile ezi-2. Kunye udibanise iqanda, ingilazi yobisi kunye nobugcisa. isipuni sebhotela. Kule mxube, uya kudibanisa iiplanga.
Inyathelo 2 Kwisitya sesibini, xuba 1 tbsp. i-spoon ye-seasoning, ityuwa, i-teaspoon yegilisi yetyuwa, kwaye udibanise konke.
Inyathelo lesi-3 Ngokulandelayo, iqatha le-perch lidibanise kwisitya kunye ne-sauce ephekiweyo.
Inyathelo 4 Emva koko, isiqwenga sesipuni esiphekiweyo sigqityiweyo.
Inyathelo 5 Faka iintlobo zeentlanzi kwisitya sokubhaka, u-oyili, uze usibeke kwi-oven eshushu.
Inyathelo 6 Emva kwemizuzu e-5 yokupheka, susa i-pan uze uphendule iinqanawa zeentlanzi. Shiya i-perch ibhaka enye enye imizuzu 7-10.
Isinyathelo 7 Lungiselela iibhasi ezibhakiweyo kunye naluphi na uhlobiso.
IDessert "Isiqithi esasendle"
Amanqamane e-Banana kwi-oven microwave
Umntwana okhethekileyo: ukukhuliswa kwabantwana abaneziphene zophuhliso
Inkxaso yengqondo yomtshato
Ukunakekelwa kwamazinyo ngexesha lokukhulelwa
I-oksijeni ye-cocktail impilo kunye nobuhle
Ngobusuku ngaphambi komtshato
Isiluleko seengqondo: indlela yokuseka ukuqonda kunye nentombazana
Ukutya kwamaGrike, izakhono zokutya, izitya zesizwe
Unokuthintela njani uxinzelelo?